T&T ट्रेड शो: उद्योग नेताहरूलाई अगाडि बढाउदै
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » T&T ट्रेड शो: उद्योग नेताहरूलाई अगाडि बढाउदै
नोभेम्बर 26, 2015
cnn कार्य NEW प्रतिलिपि_2
यो प्रत्येक वर्ष हुन्छ, उही समयमा, उही ठाउँमा। के परिवर्तन भएको छ भनेर बुझ्न तीर्थयात्री।
यो प्रत्येक वर्ष हुन्छ, उही समयमा, उही ठाउँमा। के परिवर्तन भएको छ भनेर बुझ्न तीर्थयात्री। विश्व यात्रा बजार, WTM लन्डन अधिक स्पष्ट रूपमा, ग्लोबल ट्राभल एण्ड टुरिज्म (T&T) उद्योगको वार्षिक बर्ष अन्तमा ट्राभल उद्योगका नेताहरूको साथ आउँदछ।
आउँदो पानी, कुहिर वा चमक, यातायात प्रणाली सहजता वा हडताल, मातृ प्रकृति वा मानिस को संकट, नेताहरू एकजुट अनुभव, विशेषज्ञता, दर्शन र विचार साझा गर्न। यो त्यहि हो जहाँ दुबै उच्च प्रोफाइल चरणहरूमा र विवेकी शान्त ठाउँहरूमा दिमागको बैठक हुन्छ, औपचारिक कार्यक्रमहरूमा रोटी भाँच्दा उल्लेख नगर्नुहोस्, वा एक्स्पो स्ट्यान्डमा कुरा गर्न शान्त कफी बाँड्न। हजारौं हजारौं दर्शन, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कार्यकारीहरू र व्यापारीहरू सबै टाढा धेरै ठाउँहरूमा लुकेका थिए र जानको लागि मानिसहरूले समय छुट्याएका थिए।
क्यालेन्डर बर्षको अन्त्यसम्मको निर्माणलाई चिन्ह लगाउँदै, विश्वभरका गन्तव्यहरूको लागि द्रुत गतिमा पर्यटन गतिविधिमा द्रुत गतिमा आउँदै गरेको छुट्टीको मौसम नजिकिंदै जाँदा, डब्ल्यूटीएम अगाडि हेर्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण सामूहिक रूप बनेको छ।
त्यस्तै ITB बर्लिनको पनि हो, प्रत्येक मार्चमा हुने विश्वको सब भन्दा ठूलो T&T शो। त्यहाँ नेताहरू एकत्रीकरण जहाँ के भएको छ भर्खरै बन्द भएको वर्ष, र जहाँ उनीहरूको कार्यहरू बर्षको लागि केन्द्रित गरीरहेको छ विकास र अवसरको लागि घर मा उनीहरूको क्षेत्र।
धेरै तरीकाले, यी घटनाक्रमहरू, र विश्व र क्यालेन्डर वर्षभरि अन्य धेरै, ती सब गहन कार्यक्रमको बिहान देखि बेलुका सम्म अध्यारोमा उनीहरूका सबै कार्यक्रमहरू तालिकाबद्ध गर्दै, र सबै सामाजिक समयहरू बढी सनसनीखेज मानिसहरूसँग सनसनीपूर्ण स्थानहरूमा योजनाबद्ध गरिएका, गर्न सक्छन्। गलत रूपमा खेलाडी रूपमा उद्योग बाहिर ती देख्न सकिन्छ। कार्य पक्ष सबै सजीलै बेवास्ता गर्न सक्दछ किनकि उद्योगको स्पष्ट उत्सवको कारण - यसको पहुँच, यसको प्रभाव, यसको जनता र यसको उद्देश्य।
वास्तवमा तिनीहरू को हुन् - विश्वका अविश्वसनीय भागहरूको उत्सव जहाँ यात्रीहरूलाई अन्वेषण गर्न आमन्त्रित गरिएको छ, नेताहरूलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमा कामका लागि आशिष्‌ दिइन्छ, र उद्योग साझेदारहरूलाई समर्थन गर्न प्रेरित गरिएको छ। यद्यपि यी घटनाहरूको मूल्य आँखा र विश्वले देख्न सक्ने भन्दा बढी टाढा जान्छ।
जाँदै गरेकोमा जान्छन्
यति महत्त्वपूर्ण कुरा, T&T ट्रेड शोले भाग लिने हजारौं मध्येका हरेकको लागि प्रेरणाको शक्तिशाली, भेदभाव गर्ने, recalibrating स्रोत प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरूले उद्योग अनुभव श्रृंखलामा खेल्न सक्ने जुनसुकै पनि अवसर जुन अवसरको सिर्जना कोण ट्रेड ट्रेडले अधिकार गर्न सक्दछ, त्यहाँ हुनु आवश्यक छ। यी स्थानहरू हुन् जहाँ उद्योग पign्क्तिबद्धता लिइन्छ, जडानहरू सिर्जना गर्दछ जसले शाब्दिक अरबौं उत्पन्न गर्दछ उद्योग विचारहरू, निर्णयहरू र सम्झौताहरूमा।
डब्ल्यूटीएम लन्डन एक्लैले its१,००० भन्दा बढी सहभागीहरू 51,000, yers०० क्रेताहरू भन्दा बढी bu१,००० दर्शकहरूको साथ, GB दिनको एक्रेशनको बेलामा जीबीपी २. billion बिलियन ($. billion अरब अमेरिकी डलर) मा खुला गर्दछ। तर संख्या भन्दा बाहिर, यो यी ट्रेड शो को क्षमता हो जुन यस क्षेत्रमा साँचो सफलता र दिगोपनको केन्द्रमा रहेको छ: यात्राको लागि गहिरो प्रेम।
ट्रेड शोको क्षेत्रीय हलहरू वरिपरि हिड्नु, बुथ देखि बुथसम्म विश्व भ्रमण, सबै को एक बहु-संवेदी फिड प्राप्त गर्नु हो जसले उद्योगको मुटु गहिरो, ठूलो आवाजमा हराउँछ। दृश्यहरू, ध्वनिहरू, सुगन्धहरू सबै एक धनी, मादक पदार्थको ककटेलको रूपमा एक साथ आउँदछ जुन उनीहरूको प्रत्येक कार्य दिनको र केकोको लागि एक जोश जगाउँदछ।
यो जस्तो सुन्न सजिलो छ, यो आन्तरिक उर्जाको रिचार्जिंग हो जसले विश्वभरका ट्राभल प्रोफेशनर्सलाई अझ बढी साहसी भई सोच्न, उच्चमा पुग्न जारी राख्न र भिन्नता राख्न सक्षम गर्दछ। र माया राख्नुहोस्, बिल्कुल मायालु, उनीहरू के गर्छन्।
जीवनको कामको यो प्रेम यति प्रेरणादायी हुन्छ कि यसले दिमागमा सीमा पार गर्दछ, केवल नक्सा मात्र होइन, यसले पर्यटनमा मात्र काम गर्दैन, तर पर्यटक पनि खेल्दछ। यो उत्साहलाई बेवास्ता गर्न असम्भव छ, विशेष गरी डब्ल्यूटीएम लन्डनको समयमा जुन कार्य वर्षको अन्तमा यति नजिक आउँछ जब पात्रोमा दिनहरू घट्दै गयो भने उसको आफ्नो उर्जाको घट्ने स्तरको पनि प्रतिबिम्ब हुन्छ। वर्ष लामो भएको छ, समय चुनौतीपूर्ण भएको छ। यो छुट्टीको लागि समय हो!
ब्रेक लिनको लागि यस आवश्यकतालाई अँगाल्नु सबै संस्कृतिहरूको लागि प्राकृतिक घटना होईन। केहि संस्कृतिहरू, विशेष गरी यूरोप भित्रका मानिसहरूले सराहना गर्दछन् र समय छुट्याएको स्वास्थ्य लाभहरू अँगालेका छन्। प्लेटाइमलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। जस्तो हुनु पर्छ।
उत्तर अमेरिकामा पानी भरि, तथ्या्कहरूले २०१ seeing देखी संगै एकदमै फरक कथा बताउँदछ:
• %१% भुक्तान बिदा दिनहरू लिंदैन
Summer लगभग आधा अमेरिकीहरू गर्मीको समयमा एक दिनको छुट्टी लिदैनन्
169 १XNUMX million मिलियन भन्दा बढी भुक्तानी बिदा दिन बितिसकेको छ
किन? यूएस ट्राभल एसोसिएशनका अध्यक्ष र सीईओ रोजर डो, द्रुत रूपमा यस मुद्दाको मुटुमा जान्छन्।
“अमेरिकीहरू काम शहीद जटिलबाट ग्रस्त छन्। अंशमा, यो किनभने 'व्यस्तता' भनेको सम्मानको ब्याजको रूपमा हामीले लगाउने कुरा हो। तर यो पनि किनभने हामी कठिन अर्थव्यवस्थाबाट उदाइरहेका छौं र धेरैले आफ्नो जागिरमा कम सुरक्षित महसुस गरेका छन्। दुर्भाग्यवस, कामदारहरूले उनीहरूको छुट्टीको समय गुमाउनु भनेको उनीहरूको समग्र स्वास्थ्य, कल्याण र सम्बन्धको लागि खर्च गरेको महसुस गरेन। "
आरओआई, यात्रा ब्यापार शो, लगानीमा फिर्ता? अस्पष्ट, केवल सरकार, व्यवसाय र अन्य निकायहरूको स्पष्ट, लगातार मापनका लागि दृढ मेट्रिक्सको अभावले मात्र होइन, तर यी घटनाहरूको अदृश्य, अथाह शक्तिको कारण (पुनः) पर्यटन नेताहरूलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्दछ।
यी घटनाहरू हुन् जहाँ ROI बुझ्नु आवश्यक पर्दछ, र रमाईलो गरियो, 'प्रेरणामा फर्कनुहोस्' को रूपमा। भाग लिनेहरूका लागि, अन्तिम विश्लेषणमा फाइदा? अमूल्य